ငါတို့မင်းကိုလွမ်းတယ်! TV မှာပြန်တွေ့ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့နာမည်ကြီး ၁၉ ယောက် - ဖျော်ဖြေရေး
ငါတို့မင်းကိုလွမ်းတယ်! TV မှာပြန်တွေ့ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့နာမည်ကြီး ၁၉ ယောက်
မဟုတ်ဘူး၊ မင်းမှာအရူးအမူးပြန်ဖြစ်နေတဲ့ ၉၀ ခုနှစ်တွေလိုအမြင်အာရုံတွေရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ ခဏတာခေတ္တခဏရပ်နားပြီးတဲ့နောက်ဒီနှစ် screen သေးသေးလေးကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ TV စတားတွေအများကြီးရှိတယ်။ မင်းအကြိုက်ဆုံးတွေစာရင်းလုပ်ထားသလားကြည့်ပါ။
ဓာတ်ပုံ - Mitchell Haaseth/NBC ၏ရည်မွန်ချက် ၁/၁၅
ကြယ်၏ အဲဒါက ၇၀ ခုနှစ်ရှိုးပွဲပါ လာမည့်စီးရီးတွင်ရိုင်းသောစွန့်စားခန်းအသစ်အချို့အတွက်ခေါင်းလောင်းအောက်ခြေနှင့်အနားစွန်းကိုချန်ထားပါ မင်းဒီမှာရှိလားချဲလ်ဆီး ဟာသသရုပ်ဆောင် Chelsea Handler ၏ဗော့ဒ်ကာရောစပ်ထားသောရောင်းအားအကောင်းဆုံးကိုအခြေခံသည်။ Donna Pinciotti ၏ပါးစပ်မှချဉ်းကပ်လာသောလျင်မြန်သော quippy one-liners များကိုချယ်ဆီးစဉ်းစားပါ။ ချစ်သည်! ထို့အပြင်ချယ်လ်ဆီး (တကယ့်) သည်လော်ရာ၏ကိုယ်ဝန်ဆောင်အစ်မအဖြစ်ဧည့်သည်အသွင်အပြင်ကိုဖြစ်စေသည်။ ချဲလ်ဆီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် ?! ဒါတစ်ခုတည်းကြည့်ဖို့အကြောင်းပြချက်။
မင်းဒီမှာရှိလားချဲလ်ဆီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၁၁ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ၈း၃၀ နာရီ NBC တွင် ET
ဓာတ်ပုံ - Ray Mickshaw/FOX ၏ရည်မွန်ချက် ၂/၁၅
Paula Abdul နှင့် Simon Cowell
အိုကေ၊ ဒါကြောင့် Paula နဲ့ Simon တို့ကအကဲဖြတ်အဖွဲ့ကိုဖွင့်ခဲ့တာနှစ်အနည်းငယ်ပဲရှိသေးတယ် American Idol ပါ ဒါပေမယ့်နည်းနည်းတော့ကြာသွားပြီ ရှည်လျား နှစ် ငါတို့ကသူတို့ကိုလွမ်းတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုထပ်ပြီးအော်ဟစ်နေတာကိုတွေ့ရတာငါတို့စိတ်လှုပ်ရှားတယ် X Factor ပါ မရ။ သူတို့၏ platonic နှုတ်ခမ်းသော့များသည်မည်သည့်အရိပ်အယောင်မှမပြလျှင်သူတို့သည်လည်းအတူတကွပြန်နေရသည်ကိုပျော်ရွှင်ပုံရသည်။
X Factor ပါ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ကြာသပတေးနေ့ည ၈ နာရီတွင်ထုတ်လွှင့်သည် NBC တွင် ET
ဓာတ်ပုံ - Michael Desmond/The CW ၃/၁၅
Sarah Michelle Gellar ပါ
ရိုင်းစိုင်းတဲ့သူတစ်ယောက်၊ တစ်ချိန်မှာအဆိုးဆုံးဘဲ၊ အနည်းဆုံးအဲဒါကသူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒါပဲ Buffy the Vampire Slayer ရဲ ဆပ်ပြာပြဇာတ်တွင်တီဗီသို့ပြန်လာသော alum ဖုန်းမြည်သံ သူမဟာအဓိကပြသနာတွေနဲ့တူတဲ့အမွှာအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တယ်။ သေနတ်တွေ၊ ကျောက်မျက်ရတနာတွေပေါများနေတဲ့အချိန်မှာမြင်နိုင်တဲ့သစ်သားသစ်တိုင်တော့မရှိသေးပါဘူး။
ဖုန်းမြည်သံ အင်္ဂါနေ့ည ၉ နာရီမှာထုတ်လွှင့် CW တွင် ET
ဓာတ်ပုံ - Andrew MacPherson/NBC ၏ကြင်နာမှု ၄/၁၅
Maya Rudolph, Christina Applegate နှင့် Will Arnett
Post- Saturday Night Live ပါ ရ၊ ခင်မာဘယ်သူလဲ။ နှင့် ဖမ်းဆီးခံရသူ ဦး ဖြိုးကိုကို ၊ ဒီအသစ် တစ်ညလုံး သုံးယောက်လုံးကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကိုဒီတပတ်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးနေ့အဖြစ်မိနစ် ၃၀ ရယ်ရယ်မောမောရယ်မောသံတွေရယ်၊ Oprah အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ဘယ်၊ ညာ၊ ညာတို့ကိုကိုးကားပြီးငါတို့ကိုချန်ထားခဲ့တာ။ ငါတို့သေချာကြည့်ပြီးဆက်တိုးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။
တစ်ညလုံး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ၈ နာရီတွင်ထုတ်လွှင့်သည် NBC တွင် ET
ဓာတ်ပုံ - Adam Rose/Warner Bros./CBS ၏ကြင်နာမှု ၅/၁၅
Ashton ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့နှစ်တစ်နှစ်မဟုတ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဒရာမာ ငါးနှစ်ကြားကွာဟချက် အဲဒါက ၇၀ ခုနှစ်ရှိုးပွဲပါ နှင့် ယောက်ျားနှင့်တစ်ဝက် ထိုက်တန်ခဲ့ပါတယ်။ Ashton သည် TV တွင် ၀ င်ငွေအမြင့်ဆုံးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်ပြီးဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၇၀၀၀၀၀ ရရှိသည်။ ကျိုက်! ဒါပေမယ့် Charlie Sheen ဆီကငါတို့သိတဲ့အတိုင်းပိုက်ဆံကပျော်ရွှင်မှုကိုအမြဲဝယ်တာမဟုတ်ဘူး။
ယောက်ျားနှင့်တစ်ဝက် တနင်္လာနေ့ည ၉ နာရီမှာထုတ်လွှင့် CBS တွင် ET
ဓာတ်ပုံ - Jeffrey Thurnher/The Style Network ၆/၁၅
Tia နှင့် Tamera Mowry
အမွှာနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်တွေကိုကြားလိုက်ရုံနဲ့တင်မင်းကိုရယ်စရာဖြစ်စေပါတယ် အစ်မ၊ အစ်မ theme song ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ 'ငါ့စိတ်ကိုငါနားလည်တယ်၊ ငါကိုယ်ပိုင်အချိန်ငါစတိုင်လုပ်တယ် ... ' ကောင်းပြီ၊ Tia နှင့် Tamera တို့သည် Style Network မှလက်တွေ့ပြပွဲတစ်ခုနှင့်ပြန်လာခဲ့သည်။ အလယ်တန်းပြဇာတ်အစားဒီတခေါက်မှာတော့သူတို့ကမင်္ဂလာဆောင်ခေါင်းလောင်းသံနဲ့ကလေးလေးကိုအတူတကွတွယ်ကပ်နေကြတယ်။ ကောင်းသောအရာများ၊ ငါတို့သည်ထိုအင်္ကျီလက်ပြတ်များကိုမလွတ်ဘဲမကူညီနိုင်ပါ။
Tia & Tamera ၂၀၁၂ တွင်ဒုတိယမြောက်ရာသီအတွက် Style Network သို့ပြန်လာလိမ့်မည်။
ဓာတ်ပုံ - ABC ၏ရည်မွန်ချက် ၇/၁၅
သူမဟာမကြီးပွားတဲ့မိသားစုမှာအသစ်တစ်ယောက်မဟုတ်တော့ပါဘူး အချစ်ကြီး Ginnifer ရဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရဲ့အလယ်မှာဖမ်းမိတုန်းဘဲ ရှေးရှေးတုန်းက မရ။ သူမအတွက်ကံကောင်းစွာပဲ၊ ဒီ Charming မှာ Prince Charming လည်းပါဝင်ခဲ့သည်။ တစ် ဦး အစစ်အမှန် ချစ်စရာမင်းသားလေး ငါတို့ကပျော်ရွှင်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားမယ့်အဆုံးသတ်တစ်ခုအတွက်အားစိုက်နေတယ်။
ရှေးရှေးတုန်းက တနင်္ဂနွေနေ့ည ၈ နာရီမှာထုတ်လွှင့် ABC တွင် ET
ဓာတ်ပုံ - Kent Smith/Showtime ၏ရည်မွန်ချက် ၈/၁၅
သူမအနေနဲ့အခြား TV (သို့) ရုပ်ရှင်ကဏ္ roles တွေဘယ်လောက်ပဲရောက်ရောက်၊ Claire Danes ကို Angela Chase အဖြစ်ငါတို့အမြဲစဉ်းစားလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်ဘဝဟုခေါ်သည် မရ။ ဇိမ်ခံ plaid flannels များ၊ သူပုန်အနီရောင်ဆံပင်များ၊ Ricky ၏ eyeliner နှင့်အပြစ်အနာအဆာမရှိသော Jordan Catalano တို့ကြားတွင်ထိုပြပွဲသည်ပြီးပြည့်စုံခဲ့သည်။ ငါတို့ MSCL Claire ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတောင့်တပေမယ့် အမိမြေ Claire ကအရမ်းမမိုက်ဘူး။
အမိမြေ တနင်္ဂနွေနေ့ည ၁၀ နာရီမှာထုတ်လွှင့် ET တွင် Showtime တွင်
ဓာတ်ပုံ - ABC/Joe Viles ၏ရည်မွန်ချက် ၉/၁၅
Dawson သည်အကောင်းဆုံးအမောက်အဖြစ်ပြန်လာပြီး* တိုက်ခန်း ၂၃ ၌ B ကိုမယုံပါနှင့်၊ ကစားပါ၊ ဒါကိုရယူပါ။ James Van Der Beek မရ။ ၎င်းနှင့်အတူ Paula Cole ၏တေးသွားသည် ငါမစောင့်ချင်ဘူး သူသည်ဘောင်တစ်ခုထဲသို့ ၀ င်လာသောအခါဂျိမ်းသည်ချစ်စရာအပြုံးလေးဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်လမ်းစလျှောက်သည်။
တိုက်ခန်း ၂၃ ၌ B ---- ကိုမယုံပါနှင့် ၂၀၁၂ တွင် ABC ၌ထုတ်လွှင့်မည်။
ဓာတ်ပုံ - John P. Johnson/HBO ၏ရည်မွန်ချက် ၁၀/၁၅
ချစ်စရာ WB အမှတ်တရများအကြောင်းပြောခြင်း၊ ပျော်ရွှင်မှု Team Noel တွင်ရှိနေသောပရိသတ်များ၊ ဝမ်းမြောက်ပါ။ စကော့သည်ဖန်သားပြင်ငယ်လေးသို့ပြန်သွားသည်၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်သူသည် Dean & Deluca espresso ကို Merlotte's Bar and Grill မှစျေးသက်သက်သာသာနှင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောသွေး မရ။ ငါတို့အဲဒါကိုသောက်မယ်!
စစ်မှန်သောသွေး ၂၀၁၂ နွေရာသီတွင် HBO သို့ပြန်လာလိမ့်မည်။
ဓာတ်ပုံ - Mitchell Haaseth/NBC ၏ရည်မွန်ချက် ၁၁/၁၅
သူမသည်ချစ်ခင်အားပေးသောဇနီးနှင့်ကွာသွားပြီ သောကြာညအလင်းများ - ငါတို့ကနည်းပြတေလာအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေအကြောင်းပြောနေတယ် အမေရိကန်ထိတ်လန့်ဇာတ်လမ်း မရ။ Connie ၏ဇာတ်ကောင် Vivien သည်သူမ၏လှပသောအိမ်မက်အသစ်သည်သရဲခြောက်နေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပြီးသူမသည်လည်းဝိညာဉ်ဆိုးတစ်ခုအားဖုံးလွှမ်းထားသည်။ သူမခင်ပွန်းကဲ့သို့ hunky ကဲ့သို့ (သူသည်အလွယ်တကူမြင်နိုင်သောမျက်လုံးများ Dylan McDermott ကသရုပ်ဆောင်သည်)၊ Coach ၏ဇနီးကိုသင်မလိမ်ပါ။ မင်းမလုပ်နဲ့။
အမေရိကန်ထိတ်လန့်ဇာတ်လမ်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ည ၁၀ နာရီမှာထုတ်လွှင့်သည် FX တွင် ET
ဓာတ်ပုံ - Chris Haston/NBC ၏ရည်မွန်ချက် ၁၂/၁၅
ကောင်းပြီ၊ ဒါကြောင့် Carson ကတကယ်မသွားဘူး၊ သူက ၂၀၀၂ ကတည်းကသူ့ရဲ့ညဥ့်အစီအစဉ်ကိုလက်ခံကျင်းပခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အရင်တုန်းကတွေ့ရတာအရမ်းကောင်းတယ်။ TRL VJ သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီလူကြိုက်များသည် အသံ မရ။ ငါတို့ကသူ့ကိုကြီးပြင်းလာတာ (Tara Reid ကိုလက်သည်းဆိုးဆေးနဲ့ Tara Reid ကိုတိုတိုတုတ်တုတ်ဆက်ဆံတာကိုသတိရလား။
အသံ ၂၀၁၂ တွင်ဒုတိယရာသီအတွက် NBC သို့ပြန်လာလိမ့်မည်။
ဓာတ်ပုံ - Michael Yarish/FOX ၏ရည်မွန်ချက် ၁၃/၁၅
Mike က kick-ass host ကနေပြောင်းလိုက်တာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ GUTS (crag!) တွင် Kurt Hummell ၏ပံ့ပိုးမှုအဖေသို့ဆက်ခဲ့သည် Glee အရာအားလုံးဟာကမ္ဘာကြီးနဲ့မှန်တယ်လို့ထင်ရတယ်။
Glee အင်္ဂါနေ့ည ၈ နာရီမှာထုတ်လွှင့် Fox တွင် ET
ဓာတ်ပုံ - Scott Alan Humbert/The CW ၁၄/၁၅
သူမကို Summer Roberts အဖြစ်အမြဲအမှတ်ရနေပေမဲ့လည်း O.C. (ဒီ pseudo ကိုဘယ်သူမေ့နိုင်မလဲ ပင့်ကူလူသား ဆိုးရွားသော Seth Cohen နှင့်နမ်းပါ၊ Rachel သည်သူမ၏ Orange County အမြစ်များနှင့် CW's တွင်ဆရာဝန်တစ် ဦး ကစားရန်တောင်ဘက် (နှင့်အရှေ့ဘက်) ကိုစွန့်ပစ်သည်။ Dixie ၏ Hart မရ။
Dixie ၏ Hart တနင်္လာနေ့ည ၉ နာရီမှာထုတ်လွှင့် CW တွင် ET
ဓာတ်ပုံ - Jordin Althaus/Showtime ၏ကြင်နာမှု ၁၅/၁၅
Veronica Mars (နှင့် Gossip Girl အသံ) Jeannie ပါ ၀ င်သည် အိမ်၏လိမ်လည်မှု ဤလာမည့် Showtime ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်အကျင့်ပျက်အတိုင်ပင်ခံအုပ်စုတွင်တစ် ဦး တည်းသောအမျိုးသမီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။ အိုး၊ ဒွန် Cheadle နှင့် Ben Schwartz တို့ပါဝင်သောကြယ်ပွင့်သရုပ်ဆောင်များဖြစ်လျှင်၊ Jean-Ralphio ပန်းခြံများနှင့်အပန်းဖြေ ) မင်းကိုချိတ်ဖို့မလုံလောက်ဘူး၊ သူတို့ရဲ့ tag line က 'ငါးကြီး' ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ရေကန်ကြီး။ ကြီးကြီးမားမားတွေပဲ။
အိမ်၏လိမ်လည်မှု ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၊ ည ၁၀ နာရီ ET တွင် Showtime တွင်
tank top နဲ့ဘာဝတ်ရမလည်း
သာမန် အေ့ဟေ 30% + bha 2% ကွာဖြေရှင်းချက်
အနက်ရောင်ဆံပင်များအတွက် cornrows ဆံပင်ပုံစံတွေ
purely perfect cleansing creme ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း